Wadahadalo Hoose Oo U Dhaxeeyay Odayaal Iyo Saraakiisha Kenya Oo Burburay Iyo Kenya Oo Ciidamo Soo Dhoobtay Sohdinta
Ciidamadaasi oo ka tirsan kuwa militeriga Dalka Kenya ayaa weli dhaqdhaqaaq xoogan ka wada dhulka sohdinta ee u dhaxeysa soomaaliya iyo Kenya kadib markii ay deegaanadaasi la sheegay in Howlgal Balaaran Laga Fuliyay.
Goobjoogayaal ku sugan deegaanka sohdinta ayaa sheegay in ay arkeen cidamada dalka Kenya oo Deegaanadaasi lagu soo daadgureynayo, waxaaba gebi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqa Dadweynaha ee Deegaanadaasi Sodinta iyadoo ay barakacayaan kumanaan Dadweyne oo ka cararaya Goobaha Labada Dhinac .
Ciidamada Dowlada Kenya ayaa la sheegay in lagu sooqaadayo Diyaaradaha Qumaatiga u kaca kuwaasi oo laga keenayo Goobo ka tirsan Dalkooda,
Goobjooge diiday in Magaciisa la xuso oo ku sugan Deegaanadaas aya waxaa uu sheegay in Arkeen Ciidamada Kenya oo ku hubeysan Noocyada Hubka culculus kuwaas oo fadhiya Qeybo ka tirsan Deegaanka Sohdinta .
Cidamada Kenya ayaa horay uga Dalbaday Dadka ku dhaqan Sohdinta Dhinaca Gobolka Gedo in ay iska Soo gudbiyaan laba sooro oo laga soo qafaashay Gudaha Dalka Kenya .
Dhanka kale waxaa burburay wadahadalo u dhaxeeyay saraakiisha ciidamada Kenya iyo
Odayaasha degmada ceelwaaq oo Qarsoodi ahaa kadib markii ay dhamaatay Mudadii ay u qabteen saraakiisha Kenya in dib loo soo celiyo Labo sooro oo u dhashay Dalka Talyaaniga kuwaas oo si xoog ah loogala baxay gudaha Magaalada Ceelwaaq Ee Waqooiga Kenya.
Inkastoo ay Xiriiradaasi ahaayeen kuwo dhanka Telfonka ah ayaa hadana waxaa muuqaneysa in ay gebi ahaanba istaageen xiriiradaasi u dhaxeeyay Odayaasha Iyo sarakiisha Kenya .
Isku soo wada duub oo arintan ayaa waxay tahay mid walwal farabadan ku abuurtay dadweynaha ku dhaqan Sohdinta waxaana cabsi tii ugu ballaarneyd ay ka jirtaa Goobahaasi ayadoo lagu soo daad gureynayo Militeriga Kenya .